विश्‍वकप हेर्न कस्तो टीभी कहाँ राख्‍ने? | Bishow Nath Kharel
विश्‍वकप हेर्न कस्तो टीभी कहाँ राख्‍ने?
कृष्ण किसी |
बिहीबारदेखि विश्वकप २०१४। संसारको ध्यान त्यसैतर्फ केन्द्रित छ। फुटबलको मज्जा कसरी लुट्ने भन्‍नेबारे धेरैको ध्यान केन्द्रित छ। धेरैको चाहना प्रत्यक्ष रूपमै फुटबल हेर्न पाओस् भन्‍ने हुन्छ नै। तर पनि धेरैको त्यो इच्छा पूरा हुन सक्दैन। धेरैले टेलिभिजनबाटै चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यसकारण यतिबेला टेलिभिजनबाट कसरी त्यो मज्जालाई लुट्ने भन्ने योजना धेरैको छ। त्यसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ, कहाँ राख्ने टेलिभिजन? घर, पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा कता टेलिभिजन राख्दा फुटबलको मज्जा अझ बढी नजिकबाट लुट्न सकिन्छ धेरैको ध्यान यसतर्फ छ।
त्यसो त टेलिभिजन सहरका घरघरमा भइसकेका छन्। अझ सम्पन्न परिवारमा त कोठैपिच्छे टेलिभिजन भइसकेका छन्। बैठक, पाहुना, किचेन, बेड, मिटिङ धेरै कोठामा टेलिभिजन राख्ने प्रचलन भइसकेको छ। घरका सबै परिवार एउटै कोठामा बसेर टेलिभिजन हेर्ने जमाना इतिहास हुँदैछ। फरकफरक च्यानल हेर्न रुचाउने हुँदा बालबालिकादेखि बूढाबूढीको कोठासम्ममा टेलिभिजन हुन थालिसकेका छन्। पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मललगायतका ठूल्ठूला किनमेल केन्द्र तथा कार्यालयमा पनि टेलिभिजन हुन थालिसकेका छन्। सिटी सेन्टर, बल्र्ड ट्रेड सेन्टरलगायतका स्थानमा सबैले हेर्न पाउनका लागि ठूल्ठूला टेलिभिजनको व्यवस्था हुन थालेका छन्।
ठूल्ठूला कार्यालयमा पनि सार्वजनिक रूपमा हेर्नका लागि टेलिभिजन राख्ने प्रचलन सुरु भएको छ। अझ टेलिभिजन कार्यालयमा त एउटै धेरै टेलिभिजन राखेका हुन्छन्। कुन टेलिभिजनले के प्रसारण गरिरहेका छन्, हेरेर प्रतिस्पर्धामा जान सहज बनाउन तिनीहरूले धेरै टेलिभिजन राखेका हुन्। विशेषगरी कुन टेलिभिजन च्यानलले के फ्ल्यास न्युज देखाइराखेका छन्, हेर्नका लागि टेलिभिजन राखेका देखिन्छन्।
सामान्यतया: जहाँ टेलिभिजन राखे पनि टेलिभिजनदेखि दर्शकसम्मको दूरी सातआठ फिट हुनुपर्छ। नत्र आँखामा विकार उत्पन्न हुन्छ। टीभी हेर्न मानिसको आँखाको उचाइ र टेलिभिजनको उचाइ समानान्तर हुनुपर्छ। नभए टेलिभिजन हेर्दाको मज्जा नै लुट्न सकिँदैन।
टेलिभिजन कहाँ राख्ने भन्ने विषय कुन कोठामा राख्ने भन्नेले निर्धारण गर्छ। कोठाअनुसार फरकफरक ठाउँमा टेलिभिजन राख्नु राम्रो हुन्छ। बैठक, भान्छा, बेड, बच्चाको कोठा कुनमा राख्ने हो, त्योअनुसार राख्नुपर्छ। बैठक कोठामा राख्ने टेलिभिजन सामान्यता परिवारको सामूहिक रहने भएकोले त्यहाँ ठूलो अनि राम्रो टेलिभिजन राख्नु राम्रो हुन्छ। बैठक कोठाको टेलिभिजन धेरैले हेर्ने भएकोले सोफा अनि भुइँ दुवै ठाउँबाट हेर्न मिल्ने उचाइमा राख्नुपर्छ। बेडरुममा राख्दा सुतेर पनि हेर्न मिल्ने गरी हुनुपर्छ। भान्छामा राख्ने टेलिभिजन भने अलि सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्छ। किनकि भान्छामा भाडावर्तत सफा गर्ने क्रममा पानीको छिड्का वा भाडा खसेर टेलिभिजनमा नपरोस् भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ। बालबालिकाको कोठामा राख्ने टेलिभिजन पनि अझ बढी सुरक्षित हुने गरी राख्नुपर्छ। यो कोठामा त अझ टीभी दराजभित्र राख्दा उत्तम हुन्छ। किनकि बालबालिकाले अनावश्यक रूपमा वा अन्य केही चीजले हानेर टेलिभिजन बिगारिदिन सक्छ।
पसल, कार्यालय, होटेल, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा टेलिभिजन राख्दा भने घरमा राखेभन्दा फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्थलमा राख्ने टेलिभिजन सुरक्षित रहनुपर्ने भएकाले मानिसले छुन नभ्याउने गरी राख्नुपर्छ। किराना पसल, होटेल रेस्टुरेन्टमा राख्दा पनि केही चीजले टेलिभिजनलाई क्षति नपुगोस् भन्ने हिसाबले सुरक्षित पार्नुपर्छ। होटेलमा ग्राहकका लागि कोठामा राख्ने टेलिभिजन पनि अलि अग्लो ठाउँमा कुनामा राख्नुपर्छ।
वास्तुअनुसार टेलिभिजनको ठाउँ
रामप्रसाद धिताल |
पूर्वीय सिद्धान्तअनुसार मानवजीवन पञ्चतत्त्व वा पञ्च महाभूतमा आधारित छ। अन्य वस्तुमा जस्तै वास्तुमा पनि पञ्चतत्त्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आकाश, भू, जल, वायु र अग्निको र राम्रो तालमेलबाट मात्र सबै वस्तु अनुकूल हुन्छ। एक तत्त्वमा मात्र असन्तुलन पैदा हुँदा प्रकृति प्रतिकूल बन्न जान्छ। विशेषगरी आग्नेय (पूर्व-दक्षिण) कोण अग्निको स्थान मानिन्छ। अग्निको स्थान अर्थात् अग्नितत्त्व प्रबल भएको ठाउँ। यसैकारण वास्तुशास्त्रमा अग्नि (आगो) सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य आग्नेय स्थानमा गर्नुपर्ने निर्देश छ।
अग्नितत्त्वको अर्थ आगोले मात्र पूरा हुँदैन। आगोलगायत विद्युत् जस्ता ऊर्जाशील वस्तुको स्थान आग्नेयलाई मानिएको छ। त्यसैकारण विद्युतीय साधन पनि आग्नेयमै राख्नुपर्ने वास्तुशास्त्रको मान्यता छ। सूचना, सञ्चार र मनोरञ्जनको महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिएको टेलिभिजनको स्थान पनि आग्नेय कोणमै हुने भयो। आग्नेयमा राखिएको टेलिभिजन हेर्नका लागि पूर्व वा आग्नेय नै फर्केर बस्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। हुन त आग्नेयतर्फ राखिएको टेलिभिजन हेर्नका लागि दक्षिण फर्किने गरी मेच वा सोफा राख्न सकिन्छ। दक्षिण फर्केर हेर्ने गर्नु राम्रो मानिँदैन। कतिपय विज्ञले ईशान (उत्तर-पूर्व) लाई पनि टेलिभिजन राख्ने दिशाको रूपमा लिने गरेका छन्। ईशान दिशा अत्यन्तै पवित्र दिशा हो र यहाँ राख्न हुने नहुने, गर्न हुने नहुनेबारे अघिल्ला अंकमा पनि चर्चा भइसकेका छन्। आग्नेय कोणमा राख्न नमिल्दा टेलिभिजन यो कोणमा पनि राख्न सकिन्छ। यसका लागि उत्तर वा पूर्व फर्केर हेर्नेगरी सोफा वा मेच राख्न सकिन्छ।
सूचना, सञ्चार र मनोरञ्जनको महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिएको टेलिभिजनको स्थान पनि आग्नेय कोणमै हुने भयो। आग्नेयमा राखिएको टेलिभिजन हेर्नका लागि पूर्व वा आग्नेय नै फर्केर बस्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ।
टेलिभिजन आग्नेय वा ईशानमा राख्न त सकिन्छ भनियो तर कुन कोठामा राख्ने? विशेषगरी बैठक कोठा, आगन्तुक कक्ष वा स्वागत कक्षमा टेलिभिजन राख्ने चलन देखिन्छ। ती कोठा कुन दिशामा बनाउने भन्ने पाटो छुट्टै छ। यसैगरी प्रायजसो सबैको शयनकक्षमा टेलिभिजन राखिएको पाइन्छ। कतिपय विज्ञले शयनकक्षमा टेलिभिजन नराख्नु पनि भनेको पाइन्छ। जुनै कोठामा भए पनि टेलिभिजनबाट आउने किरणको प्रभाव मानिसको आँखा र अन्य अंगमा पनि पर्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। यसैगरी टेलिभिजन राख्ने स्थानको उचाइ पनि कोठा, प्रयोजन, हेर्ने स्थान आदिबाट निर्धारण गर्न सकिन्छ। सदुपयोग गर्न जान्दा टेलिभिजनबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। दुरुपयोग गर्दा वा दृश्ययोग्य सामग्रीको छनोट गर्न नसक्दा यसमा लत बस्ने र दीर्घकालीन हानी गर्ने तथ्य पनि छ। आफूले मात्र होइन घरका सानासाना नानीलाई कस्ता सामग्री, कति समय देखाउने भन्ने विषयमा अभिभावक गम्भीर हुनुपर्छ।
र्‍यालबाटै पत्ता लाग्छ मधुमेह
मिति : २०७१ जेठ, २५ आइतबार
मधुमेहका रोगीले आफ्नो शरीरमा चिनीको मात्रा थाहा पाइरहनुपर्ने हुन्छ। रगतमा चिनीको मात्रा थाहा पाउन प्रत्येकपटक शरीर घोचेर रगतको नमुना निकाल्नु झन्झटिलोमात्र होइन, कहिलेकाहीँ पीडादायी पनि हुन्छ।पिसाबबाट चिनीको मात्रा थाहा पाउन पनि त्यति विश्वसनीय मानिँदैन।
यस्तो अवस्थामा मधुमेह रोगीका लागि खुसीको खबर छ।अमेरिकाको ब्राउन विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले र्‍यालको माध्यमबाट रगतमा चिनीको मात्रा पत्ता लगाउने चिप्स विकसित गरेका छन्। यो चिप्स बजारमा आएपछि मधुमेहपीडितको शरीर घोचेर अझ पीडा दिनुपर्ने अवस्था आउनेछैन। एक इन्च चौडा भएको यो चिप्सले प्रकाशको माध्यमबाट आफ्नो सम्पर्कमा आएको र्‍यालको रासायनिक गुण पत्ता लगाउँछ।-एजेन्सी
हिला कस्ता पुरुषप्रति बढी आकर्षित हुन्छन्?
मिति : २०७१ जेठ, २३ शुक्रबार [16238 पटक पढिएको]
पुरुषलाई जसरी महिलाको सुन्दरता र गुणले आकर्षित गर्छ त्यसरी नै महिलालाई पनि पुरुषप्रति आकर्षित हुन्छन्। उनीहरू पनि आफ्नो पार्टनरमा केही गुण खोज्छन्। तपाईं पनि आफ्नी प्रेमिकाको मन जित्‍न चाहनुहुन्छ भने केही उपाय अपनाउनै पर्छ। यी उपाय अपनाउनुस् र आफ्नी प्रेमिकाको मन जित्‍नुस्:
सुपरम्यान जस्तो होस्
महिलालाई आफू सुरक्षित हुन मन पर्छ। पुरु षले महिलालाई हरेक समस्याबाट बचाउन सक्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ। जब उनी कुनै समस्यामा हुन्छिन्, उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ। महिलाहरू सधैं त्यो पुरु षलाई सम्मान गर्छन्, जो कठिन समयमा डटेर उनको साथमा हुन्छ। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि दृढताका साथ सामना गर्नुपर्छ।
डियोडोरेन्टको विज्ञापनमा सुगन्धबाट महिलाहरू पुरु षप्रति आकर्षित भएको देखाइन्छ। तर यसलाई पूरै नकार्न पनि सकिँदैन। आफू सुहाउँदै डियोडोरेन्ट चयन गर्नुपर्छ। पहिलो डेटमा हो भने डियोडोरेन्ट चयन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
इमानदारी अहिलेको समयमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दीर्घकालीन सम्बन्धको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने महिला साथीसँग कहिल्यै झूट नबोल्नुस्। सुरुवातमा केही समस्या भए पनि अन्तिममा तपाईं आफ्नी प्रेमिकाको भरोसा जित्न सफल हुनुहुनेछ।
सेलिब्रेटीको सिक्स र एट प्याकको त जसलाई पनि मन पर्छ। महिला कसिलो शरीर भएको पुरु ष मन पराउँछन्। नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नुस् अनि जित्न सकिन्छ प्रेमिकाको मन।
पहिरनको बारेमा राम्रो जानकारी छैन भने कुनै केटी पट्याउने कुरा बिर्सिए हुन्छ। आफ्नो स्टाइलमा ध्यान दिनुपर्छ। कस्तो ठाउँमा कस्तो पहिरन गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ। स्टाइलिस्ट व्यक्तिको सहयोगबाट यी कुरा जान्न सकिन्छ। ‘क्लथ मेक द म्यान’ भन्ने त भनाइ नै छ।
कुनै राम्रो हेयरस्टाइलले तपाईंलाई पक्कै पनि नयाँ लुक दिन्छ। नयाँ हेयरस्टाइल बनाउन पर्खिरहनुपर्ने समय छैन। तुरुन्त हेयरस्टाइल चेन्ज गर्नुस् र प्रेमिकाको मन जितिहाल्नुस्।
होचापुड्का रेस्टुराँ: अग्ला व्यक्तिलाई रोजगारी
हिलामा भएको शक्ति र क्षमता पुरुषमा हुँदैन
मिति : २०७१ जेठ, २२ बिहीबार
रिन्छेन योञ्जन |
बिहानी कसरी बित्छ?
विहान उठेर भगवान्लाई सम्झिन्छु। लामो पूजाअर्चना गर्ने बानी छैन। धुप बालेर भगवान स्मरण गर्छु। त्यसपछि एक कप चियासँगै मेरो दिन सुरु हुन्छ। चियासँगै प्रेरणादायी किताब पढ्छु। बिहानको समयमा सिर्जनशील काम गर्न मन लाग्छ। त्यसैले प्राय: सिर्जनशील काम बिहानै गर्छु।
अहिले पढिरहेको पुस्तक?
अहिले पूर्वीय तथा पाश्चात्य संगीतकारको बायोग्राफी पढिरहेकी छु। योसँगै संगीत पनि सुनिरहेकी छु। महाभारतको सिरिज पनि पढिरहेकी छु।
मन परेको पुस्तक?
‘गन विथ द विन्ड’ मलाई मन परेको पुस्तक हो। अहिले चाहिँ धेरै बायोग्राफी नै मन पर्छ।
प्रशंसा, सम्मान र समझदारी।
विवाह कत्तिको आवश्यक छ?
विवाह आवश्यक छ भन्ने लाग्दैन। तर जीवनलाई अझै धेरै बुझ्न विवाहले सहयोग गर्छ।
सुन्दरता र बौद्धिकतामा कुन आवश्यक जस्तो लाग्छ?
दुवै चाहिन्छ। सतही रूपमा बाह्य सुन्दरताको कुरै नगरौं। मानिस बौद्धिक नभई सुन्दर हुनै सक्दैन।
सबैभन्दा खुसी भएको क्षण?
म सधैं खुसी हुन्छु। बिहान उठ्दा पनि खुसी नै भइरहेकी हुन्छु।
सपना के के छन्?
सपना धेरै छन्। दक्षिण अमेरिकाको हरेक ठाउँ घुम्न चाहन्छु। प्यासिफिक महासागरमा ‘डिप सि डाइभिङÓ गर्ने मेरो चाहना छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियामा घोड सवार, चलचित्र बनाउने र किताब लेख्ने पनि सपना छ।
कुन सपना पहिले पूरा गर्ने?
जुन सकिन्छ त्यही। कुनै पनि अवसर गुमाउन चाहन्न म। लेख्न त सुरु गरिसकेकी छु। किताब लेख्ने र घुम्ने काम एकै पटक होला जस्तो छ।
जीवन के हो ज स्तो लाग्छ?
हरेक क्षणलाई बाँच्नु नै जीवन हो।
राजनीतिमा रुचि छ?
थोरै मात्र रुचि छ।
महिला हुनुको अर्थ?
महिलामा भएको शक्ति र क्षमता पुरु षमा हुँदैन। हरेक जन्ममा महिला हुन चाहन्छु।
आमा हुनुको अर्थ?
समाजलाई जन्माउनु र हुर्काउनु।
आत्मविश्वास र सिक्ने प्रयास।
समाज परिवर्तनमा अबको कदम कतातर्फ?
अहिले सांस्कृतिक विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छु। संगीत, नाटक र चलचित्रले समाज परिवर्तन गर्न ठूलो सहयोग गरेको हुन्छ। समाजमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो बेग्लै परिचय बनाउन सक्नुपर्छ। एकअर्काको प्रशंसा गर्ने वातावारण निर्माण गर्न चाहन्छु। वातावरणको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेँ। अबको यात्रा सांस्कृतिक विकास तर्फ लम्कँदैछ।
प्रस्तुति: विनीता मरहट्टा
गर्मीमा छाला चम्काउने अचुक उपाय यस्तो छ
उर्सना तामाङ |
गर्मी ज्यादै बढेकाले चर्को घामले गर्दा छालामा विभिन्‍न समस्या आउन सक्छन्। छालामा सर्नबर्न हुने, चायापोतोलगायतका समस्याले पनि सताउन सक्छ। यही कारणले गर्दा यस मौसममा यी विभिन्न प्याकहरूलाई अनुहारमा लगाएर आफ्नो छालालाई सुन्दर र चम्किलो बनाउन सकिन्छ।
: सुन्तलाको बोक्रालाई सुकाएर पिस्ने। दुई चम्चा सुन्तलाको बोक्राको धूलोमा एक चम्चा बदामको धूलो हाल्ने। यस मिश्रणमा एक चम्चा बोरिक पाउडर र रोजवाटर मिसाई प्याक बनाउने। यस प्याकलाई अनुहारमा लगाएर १५ देखि २० मिनेटसम्म राख्ने र सफा पानीले पखाल्ने।
: आलुको रस, मह, कागतीको रस, नरिवलको धूलोमा गुलाब जल हालेर बनाइएको प्याकलाई अनुहारमा दल्ने र केही समय राखेर पानीले अनुहार धुने।
: नीमको धूलो, मह र चन्दनको धूलोमा गुलाबजल हालेर राम्रोसँग फिटेर प्याक बनाउने।
: काक्रोको टुक्रालाई पिसेर त्यसमा कागतीको रस हालेर बनाएको प्याकलाई दुई घन्टासम्म अनुहारमा राखेर राम्रोसँग मुख धुने। यो प्रक्रियालाई नियमित रूपमा गर्नाले चायाबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
: तैलीय छालाको लागि भने बन्दाको रसमा जौको पीठो मिसाएर बनाएको प्याक लगाउनाले फाइदा हुन्छ।
: एक चम्चा मैदा, एक चम्चा बेसारमा थोरै गाँजरको रस र पाँच छ थोपा कागतीको रस मिसाएर बनाएको प्याकलाई अनुहारमा लगाउनाले छाला सफा र चम्किलो हुन्छ।
: बेसारमा दही मिसाएर बनाएको प्याकले पनि अनुहारको छालालाई सुन्दर र चम्किलो बनाउँछ।
(ब्युटिसियन उर्सना गैरीगाउँस्थित दर्पणा ब्युटिपार्लरसँग सम्बन्धित छन्।)
Source : http://www.annapurnapost.com/en/news/business/8671/.htm